1. Gịnị mere o ji dị ụmụ mmadụ mkpa ka e nwee otu ọchịchị nke ga-achị ụwa niile?
Ọtụtụ nsogbu ụmụ mmadụ nwere taa zuru ụwa ọnụ. Ọtụtụ ndị bi ná mba ụfọdụ bụ ndị ogbenye na ndị ụwa na-atụ n’ọnụ. Ma ná mba ndị ọzọ, ọtụtụ ndị nwere ihe ndị na-ezuru ha, na-atụfukwa atụfu. N’ihi ya, ọ bụ naanị otu ọchịchị nke ga-achị ụwa niile nwere ike ime ka akụ̀ ndị dị n’ụwa ruo onye ukwu na onye nta aka.—Gụọ Ekliziastis 4:1; 8:9.
2. Ònye ka a ga-enye ọchịchị ahụ nke ga-achị ụwa niile?
Ọ bụghị mmadụ niile chọrọ ka e nwee otu onye ọchịchị nke ga na-achị ụwa niile. Ihe kpatara ya bụ na o nweghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ọ bụla ga-achịtali ụwa a. Ihe ọzọ bụ na ndị kwe, ndị ekweghị, ga-eme ka a ghara inwe otu onye mmadụ niile ga-eji otu obi kweta ka ọ chịwa anyị. Ihe ọzọkwa abụrụ na ọ bụrụ na ọchịchị abaa otu onye aka, isi ga-ebuwe onye ahụ, ya aghọzie eze onye agwala m. O nweghị onye ga-achọ ka otu onye ọchịchị nke ga-akpa ndị ọ na-achị ezé chịwa mmadụ niile.—Gụọ Ilu 29:2; Jeremaya 10:23.
Jehova Chineke ahọpụtala Ọkpara ya bụ́ Jizọs ka ọ bụrụ ya ga-achị ụmụ mmadụ ruo mgbe ebighị ebi. (Luk 1:32, 33) Jizọs ebiela n’ụwa hụ otú imi na anya dị ụmụ mmadụ. N’oge ahụ ọ nọ n’ụwa, ọ gwọrọ ndị ọrịa, zie ndị dị nwayọọ n’obi ozi ọma, sorokwa ụmụntakịrị nọrịa. (Mak 1:40-42; 6:34; 10:13-16) N’ihi ya, Jizọs ga-achịtali ụwa.—Gụọ Jọn 1:14.
3. Ọ̀ ga-adịli mfe inwe otu onye ọchịchị nke ga-achị ụwa niile?
Chineke ahọpụtala Ọkpara ya ka o si n’eluigwe na-achị ụwa. (Daniel 7:13, 14) Onye ọchịchị na-anọ naanị otu ebe achị obodo niile ọ na-achị. Ọ bụkwa otú ahụ ka ọ dị Jizọs. Jizọs ga-anọ n’eluigwe na-achị. Ọ gaghị abịa nọrọ n’ụwa ka o nwee ike chịa ụmụ mmadụ.—Gụọ Matiu 8:5-9, 13.
Ọ̀ bụ mmadụ niile ga-achọ ka Jizọs chịwa ha? Mba. Ọ bụ naanị ndị ihe ọma na-adị mma ga-achọ ka Jizọs chịwa ha. Jehova ga-ebibi ndị niile jụrụ ezigbo Onye ọchịchị ahụ ọ họpụtara bụ́ onye hụrụ ụmụ mmadụ n’anya.—Gụọ Matiu 25:31-33, 46.
4. Gịnị ka onye ahụ ga-achị ụwa niile ga-emere ndị mmadụ?
Jizọs achịkọtawala ndị dị umeala n’obi otú ahụ onye ọzụzụ atụrụ si achịkọta atụrụ ya. O si ná mba dị iche iche na-achịkọta ha ma na-akụziri ha iwu Chineke nakwa otú ha ga-esi na-ahụ ibe ha n’anya. (Jọn 10:16; 13:34) Ha ji obi ha niile na-akwado Jizọs nakwa ọchịchị ya. (Abụ Ọma 72:8; Matiu 4:19, 20) N’ụwa niile, ndị ahụ Jizọs ga-achị ji otu obi na-ekwusa na Jizọs abụrụla Eze.—Gụọ Matiu 24:14.
N’oge na-adịghị anya, Jizọs ga-eji ikike o nwere wepụrụ ụmụ mmadụ ọchịchị ọjọọ. Ọ họrọla ụfọdụ ndị na-eso ụzọ ya bụ́ ndị na-ejighị ofufe Chineke egwu egwu ka ha soro ya nọrọ n’eluigwe na-achị ụwa. (Daniel 2:44; 7:27) Ọchịchị Jizọs ga-eme ka ndị niile bi n’ụwa mara Jehova, ọ ga-emekwa ka e nwee ụdị paradaịs ahụ e nweburu mgbe Chineke kere ụmụ mmadụ.—Gụọ Aịzaya 11:3, 9; Matiu 19:28.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe ndị a kọrọ n’isiokwu a, gụọ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? isi nke 8 nke akwụkwọ a Ndịàmà Jehova bipụtara.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Chineke Ọ̀ Ga-eme Ka E Nwee Otu Ọchịchị nke Ga-achị Ụwa Niile?